ဒီလို တောင်ကြောတွေထဲမှာ ထိုကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်သုတ်ထားသော...????? ~ ဒီမိုဝေယံ
ဒီလို တောင်ကြောတွေထဲမှာ ထိုကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်သုတ်ထားသော...?????
(မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘယ်နေရာက ဘာအဆောက်အဦးလဲ..???)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း စက်ရုံတွေကို လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ နေရာတွေနဲ့ ဂြိုလ်တုကနေ ဖမ်းယူ ထောက်လှမ်းနိုင်မယ့် နေရာတွေ ရှောင်ကွင်းပြီး တောတောင်ထူထပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ တည်ဆောက်လေ့ရှိတာပါ။ ဒီအတွက်လည်း ငွေကြေး အကုန်အကျ အများကြီး သုံးစွဲရတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးဟောင်း စိုင်းသိန်းဝင်းက ဆိုပါတယ်။ (ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းနှင့် RFA မေးမြန်းချက်)
RFA သတင်းပြန်ဖတ်ချင်ရင်.. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6686096359471540135&postID=487442483558998437
သတင်း မတင်ဘူးလားလို့ မေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်... ။ အချိန်အခက်အခဲကြောင့် သတင်းများ မတင်နိုင် ဖြစ်နေသည်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်.....